Maxkamada Götenborg oo ka laabatay go'anka lagu xiray Iskuulada Islaamiga
HomeWararka Maanta SomaliskaMaxkamada Götenborg oo ka laabatay go’anka lagu xiray Iskuulada Islaamiga
Maxkamada Götenborg oo ka laabatay go’anka lagu xiray Iskuulada Islaamiga
November 12, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Maxkamadda maamulka ee magaalada Stockholm ayaa maanta go’aan ku gaartay in la joojiyo xiritaanka saddex dugsi oo diinta Islaamka lagu barto oo ku yaalla magaalada Göteborg, taasoo xadgudub ku ah go’aankii guddiga kormeerka dugsiyada.
Kormeerku wuxuu go’aansaday inuu xidho saddexda dugsi ee Römosseskolan ee Göteborg laga bilaabo Noofambar 19, iyada oo la tixgelinayo in xubnaha guddiga “aan ku habboonayn” inay qabtaan hawlo waxbarasho.
Dugsiyadu waxay ka tirsan yihiin Ururka Dugsiyada Horumarka (Framstegsskolan). Kormeerka dugsigu wuxuu tixgeliyey in xubno badan oo ka tirsan guddiga maamulka ee ururka aysan ku habboonayn sii wadida hawlaha waxbarashada.
Iyadoo Maxkamaddu ay maanta go’aan ku gaartay in la hakiyo go’aankaas inta laga gaarayo nuxurka arrinka, taasoo ka dhigan in dugsiyadu sii wataan howlahooda waxbarasho.
Ka dib go’aankii kormeerka ee lagu xiray dugsiyadaasi, waxa ay xeer ilaalinta ku soo eedeysay maamulihii hore ee dugsiyada wax isdabamarin iyo dambiyo maaliyadeed oo ka daran isagoo la wareegay lacag dhan 13 milyan oo karoon.
Baadhitaan uu daabacay wargeyska fiidnimo ee GT) ayaa lagu sheegay in malaayiinta la lunsaday qaarkood lagu kharash gareeyay guryo dhillooyin ah oo ku yaalla Thailand iyo hoteello qaali ah oo ku yaalla dalal dhowr ah.